बच्चा बोकेकी महिला पि’ट्ने प्रहरीमाथि अनुसन्धान सुरु, के हाेला त कारवाहि ? — Imandarmedia.com
बच्चा बोकेकी महिला पि’ट्ने प्रहरीमाथि अनुसन्धान सुरु, के हाेला त कारवाहि ?
काठमाडौं । बच्चा बोकेकी महिलालाई पि’ट्ने प्रहरीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरी एक्सनमा आएको हो । महानगरीय प्रहरी प्रभाग, भैंसेपाटीका प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलमाथि प्रहरीले आन्तरिक छानविन सुरु गरेको जानकारी गराएको छ ।
नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी हेम खत्रीको घर घेर्ने टोलीमा सहभागी हेमा श्रेष्ठलाई ला’ठी हा’नेपछि इ’न्सपेक्टर पौडेलमाथि छानविन सुरु गरिएको हो । ‘प्रहरी मेरो साथि’ भन्ने स्लोगन दिएको प्रहरीले यस खालको व्यवहार गर्नु दुःखद भएको धेरैको बुझाई रहेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि ललितपुर प्रहरी परिसरले छानविन सुरु गरेको भनिएको छ । निर्देशनपछि ललितपुर प्रहरीले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति निर्माण गरेको छ । समितिलाई घटनाबारे यर्थाथ विषय पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउन म्याण्डेट दिइएको छ । प्रतिवेदनको रायको आधारमा पौडेलमाथि कारबाही हुनसक्छ । समितिले पौडेललाई प्रारम्भमा स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी थालेको छ ।
काखमा बच्चा बोकेकी महिलालाई लाठी हान्ने प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीका प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलमाथि छानविन गर्न एसपी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ।शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनपछि घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न ललितपुर प्रहरी परिसरकी एसपी सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेको हो।
घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान पनि सुरू गरिसकेको जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान गर्न समिति बनाइएको एसएसपी टेकप्रसाद राईले सेतोपाटीलाई बताए।बिहीबार ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल हेम खत्रीको घरअगाडि प्रहरी निरीक्षक पौडेलले काखमा बच्चा बोकेकी हेमा श्रेष्ठलाई लाठी प्रहार गरेका थिए।
एकजना महिलालाई पछाडिबाट प्रहरीले लाठी हानेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। इन्स्पेक्टर पौडेलले काखमा बच्चा बोकेकी हेमा श्रेष्ठलाई प्रहरीको गाडीबाट धकेलेर पछाडिबाट लाठी हानेका छन्।